Zemali Chinese Feng Shui nokuchuma endlini
Ukuze esingaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu iminyaka eMpumalanga, futhi ikakhulukazi e-China, kusetshenziswa kakhulu isayensi lobumbano Feng Shui. Umphumela isobala: emazweni anjalo bayachuma, kanye labantu kungaba ukuziqhayisa yokuphila kwabo isikhathi eside. Kungani-ke ungasebenzisi amanye amaqhinga yalesi isayensi yasendulo ukuthi ukuheha ngemali ekhaya lakho? Lokhu kungcono kakhulu ukukwazi ukusiza lasendulo zemali Chinese. Esikhathini umkhuba Feng Shui - uwuphawu enamandla kakhulu ukuchuma ingcebo, ikakhulukazi uma iphathelene ngentambo ebomvu, ophuzi noma igolide.
Kubukeka sengathi zemali Chinese
Ngokubukeka bona zihlukaniswa kalula kusuka kwamanye amanothi asebhange, futhi ngokuqinisekile wena endaweni ethile ngizibone. zemali Chinese zihlukaniswa round isimo sabo, maphakathi okuyinto umgodi sikwele. Umbuthano lifanekisela esibhakabhakeni nomhlaba sikwele. Lapho lezi zinhlamvu ezinye izinhlelo zisebenza, akha inhlanhla triad izingxenye ezintathu: esibhakabhakeni-indoda-umhlaba. On Uhlangothi ngalunye kukhona Yang, okuyinto ungabahlukanisa yizinhlamvu zesiHebheru ezine ezithi Chinese, kanye Yin - izinhlamvu ezimbili. Numismatists futhi nje abantu curious ungathola lwemibhalo inthanethi zemali Chinese, futhi ababheke ngokuningiliziwe.
Amasampula bokuqala babedalwe ngesikhathi yasebukhosini enkantolo nabeluleki endala, okwakuwukuphela kwezidalwa amakhosi wangempela feng shui. Lokhu kuchaza yokuthi zemali Chinese ziye zaba uphawu enamandla ukuchuma, injabulo nengcebo engapheli. Futhi, avame ukusetshenziswa njengendlela njengentelezi enamandla ukuba asivikele amabutho ezimbi. Original zemali IsiShayina - a rarity, futhi ukuthola kunzima kakhulu, ngoba feng shui umkhuba, amasampula impinda zisetshenziswa ikakhulukazi.
Indlela yokusebenzisa Chinese zemali
Ukuheha ngemali nasebhizinisini labo, kufanele ibekwe ezindaweni ukuthi zenzelwe ukwenza inzuzo. Isibonelo, uma usebenza kwikhompyutha - hang eyodwa noma ngaphezulu zemali ezihambisana kuso noma nje ufake uhlamvu lwemali ephaketheni esikhwameni. Ngezinye izikhathi basuke immured ku isisekelo sesakhiwo entsha, kusengaphambili ebeka yokuchuma ngokwezomnotho nabanikazi. Kukhona iphuzu elibaluleke - uma uku-Hangout zemali endlini kufanele landela umthetho - yang uhlangothi kumele lubheke phezulu, futhi yin - phansi. Njengoba njengentelezi ngokuvamile zemali Chinese alengiswa ngaphezu wangaphambili, noma ukubeka ngaphansi kwetafula. Ukuze uthuthukise umphumela ngokuvamile okuthiwa ashiwo izingcezu ezimbalwa ebomvu. Futhi kulesi simo, futhi, kukhona caveat - kuye ngokuthi lemali ukuba lokhu noma lokhuya yi. Ngokwesibonelo, izinhlamvu zemali ezimbili - uphawu wayenemfuyo izimali, futhi ngakho bavame ukusebenzisa ibhizinisi futhi ibhizinisi abantu. Noma kunjalo, asetshenziselwa i harmonization ubudlelwane phakathi kwendoda nomkayo - kulesi simo zemali ufakwe ngaphansi komqamelo. Three - ubunye izulu nomhlaba kanye ndoda, kanye imithombo ezintathu engenayo: wathola imali, wafika ingcebo okungazelelwe kusukela inzuzo ngaphandle. Xhuma ezine noma eziyisikhombisa akufanele kube - lokhu njengentelezi ngokuphelele nanzuzo. Ukuze ahwebe usebenzisa 5 izingcezu, ezulwini inhlanhla, abasizi nothisha - 6. Inqwaba 8 zemali Chinese yakhelwe kubangele inflow basuke bengabangane bengcebo kusukela cishe yonke imithombo kunokwenzeka. Kwesinye isikhathi lokhu njengentelezi zihlanganisa uhlamvu lwemali eyesishiyagalolunye nokuphuma kwemali zanqwabelana maphakathi. Ochwepheshe bathi kuyindlela engcono kakhulu yokusebenzisa imali yamaphepha Qin Dynasty - yiwo anamandla kakhulu. Khetha izinombolo zakho bese ubeka zemali-Shayina e ezifanele kakhulu izincomo Feng Shui isikhala. Kukhona kwemali bazokwazi ukukuthola njalo.
Izakhi eyinhloko izinhlelo yemali: izinhlobo zezimali kanye rates abo
Lapho dollar uwa? Kanjani ukuba sihlaziye isimo emakethe lwemali futhi baqonde: dollar ziyokuwa noma bavuke?
I ukwehla we hryvnia ngo-2014: Imithelela umnotho
Euro - lwemali European Union. History of the course. Ukwethulwa lwemali
British okokuphrinta: umlando nesenzakalo
Indlela ukususa iphunga moonshine ekhaya? Izindlela kanye ukuhlanzwa ubuchwepheshe
Inqubo ukulethwa kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni: amazinga ayisisekelo
Sokukhulelwa Amanga kwabesifazane: izimbangela, izimpawu, amaqembu ingozi
Esifubeni Tall - kukuhle njalo?
Snake sobuhlalo - yezandla yasekuqaleni
Kanjani ukuba ocansini?
Ibhizinisi Valuation. Izindlela kanye nezimiso ibhizinisi ukulinganisa
Liliya Hegay: Biography, usuku lokuzalwa, isithombe
Kungakhathaliseki ukwenza injini Tuning Vaz-2106?
Abalingisi "Clone" Zesikhathi Esidlule Nezanamuhla: Biography, ukuphila siqu futhi amaqiniso athakazelisayo
Umfana Fluid: yini ukukhetha? Lolu ketshezi kangcono ugwayi electronic
Kungenzeka yini ukuthatha ngesikhathi sokukhulelwa anaferon